Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Qasim al-Rimi
Qasim al-Rimi waxaa loo magacaabay emir ka AQAP bishii Juun 2015 kii, wax yar ka dib markii uu ku dhaartay inuu adeecayo hoggaamiyaha kooxda al-Qaacida Ayman al-Zawahiri oo wuxuu cahdi ku maray inuu dib u bilaabayo weerarrada Maraykanka uu ku qaadayo. Al-Rimi waxay tababar ay argaggixisada ku siinaysay kaabka al-Qaacida ee wadanka Afghanistan sanaddadii 1990 aadkii, marka xigtana waxay ku noqdeen dalka Yemen oo waxay noqdeen abbaanduulaha ciidanka AQAP. Sanadku markuu ahaa 2005 waxaa lagu xukumey shan sano oo xarig ah wadanka Yemen dhexdiisa isagoo qorsheynayay inuu dilo Safiirka Ameerikaanka ee Yemen u fadhiyay, oo wuxuu baxsaday 2006 dii. Al-Rimi waxaa la la xiriiriyaa weerarkii dhacay bishii Seteember 2008 ee lagu qaaday Safaaradda Maraykanka ee Sanca kaas oo sababay in 10 qof oo waardiyayaal reer Yemen ah, afar shicib, iyo lix argaggixiso ay ku dhintaan. Al-Rimi ayaa sidoo kale waxaa la la xiriiriyaa isku daygii isoo biimayay qarax ee dhacay bishii Diseembar 2009 ee ninkii lagu naanaysan jiray “underwear bomber” [“matanti ku qarxiyihii”] Cumar Faaruuq Cabdulmutallib soo fuulay diyaarad ku soo socota Maraykanka. Sanadkii 2009, dowladda Yemen waxay ku eedaysay inuu howl-wadeen ka ahaa kaamb tababar ee al-Qaacida oo ku yaalay gobolka Abyan ee dalka Yemen.
Fiidiyow soo baxay 7da bisha Maajo, 2017, taageerayashiisa ku nool wadamada reer Galbeedka wuxuu ku boorriyay inay fuliyaan weeraro “sahlan oo fudayd ah” oo wuxuu ammaanay Cumar Matiin, oo dilay 49 qof taariikhdu markay ahayd Juun 2016 xabbado ku tirin ka dhacday caways ku yaalo magaalada Orlando ee gobolka Florida.
Bishii Maajo 2010, Waaxda Arrimaha Dibadda waxay al-Rimi u magacawday inuu yahay Argaggixiso Gaar ah oo Caalami ah sida hoos timaada Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224. Bishii Maajo 2010, al-Rimi waxaa lagu daray Liiska Guddiga Cuna-qabataynta 1267 ee Qaramada Midoobay (UN) ee shaqsiyaadka la la xiriiriyo ururka al-Qaacida/ISIL. $5 milyan oo ah abaal-marinta hore ee loo bixinayo al-Rimi waxaa lagu dhawaaqay 14ka bisha Oktoobar, 2014.
Tariikhda Dhalashada: 5ta Juun, 1978
Taariikhda Baasaboorka la soo Saaray waa: 3 Luulyo, 1999
Naanays: Qasim al-Raymi, Qassim al-Raimi, Qassim al-Raymi, Qassem al-Remi, Qasim al-Rami, Abu Harayrah, Abu Hurayrah Al-San'ai, Abu 'Ammar
Kooxda/ha Argaggixisada: Al-Qaacidada Gacanta Carabta (AQAP)
Wasaarada Arimaha Dibadda SDGT: 11ka Maajo, 2010
3da bisha Fibraayo, 2009- dowladda Sacuudi Carabiya waxay soo qortay argagaxisada aadka loo raadinnayo